The Planes havasi cathing ari kubhururuka zvine materu.
kosha The Planes havasi cathing ari kubhururuka zvine materu.
1 gore 9 ago #479 by Geniousabhishe1
Chaizvoizvo Ini paIndaneti 737 164 livery chawo rongedza uye B787 chawo rongedza uye kana ini kubhururuka kuti ndawanira kuti hazvina takwira papfungwa materu. It rwoga mitsetse kukwira runway asi haina inobudisa papfungwa materu.
1 gore 9 ago #482 by Gh0stRider203
Mangwanani akanaka (OK zvakanaka zvazviri masikati pano muna Texas).
Ndinowanzotaura kubhururuka pakati B747-400LCF dzakawanda nguva, uye vakaona kuti sezvo zvakanaka VAKAWANDA ndege My. Handina chokwadi kuti nei, nokutendeseka. Ndinowanzotaura kuva vakanaka zvakanaka pamusoro "ichibhururuka bhora" manually, asi kuva akatendeseka ... handidi kuvimba kombiyuta kuzviita Akandikodzera elnaz Ndinoziva u QW757 achazviita, asi nomwoyo wose anoita Me huta elnaz
1 gore 9 ago #497 by Tonny0909
Iva nechokwadi chokuti kana mukandiuraya "Swedera" pamusoro, iwe chokukuvadza "alt HLD"
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Gh0stRider203, JanneAir15
1 gore 9 ago #500 by JanneAir15
AA ... zvino ndava kuziva nei ndaiva nezvinetso Project Airbus A380. Ndinokutendai zvikuru nokubatsira zvakare Tonny0909!
1 gore 9 ago #518 by Geniousabhishe1
Tinotenda kuti pfungwa dzako asi yangu matambudziko yanyangarika apo l sp2 yakaiswa pa maitiro angu.
1 gore 9 ago #519 by WilliamB
Ndaiva dambudziko iri pamberi uye nzira yakanakisisa yokubata nayo kuti kana kumisa pamusoro localiser akapfuura uye panguva imwe pakakwirira kana zvakafanana chinhambwe kubva runway asi rezasi mu kukwira. Uyewo chii chingabatsira zviri kana achangogara iwe kumisa pamusoro ILS tinya nzira Rakamira. edza izvi uye kana vasingakupi kuita wemanomano vakarinda YouTube kana kumwewo. localisers Most vari kumativi 2000-2500ft sezvo yakanakisisa nzvimbo kuva. Vapei zvose kare.